အမှန်တရား၏လက်တွေ့သီအိုရီ - အဓိပ္ပာယ်
အမှန်တရားများ၏လက်တွေ့ကျကျသီအိုရီ, ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆအလုံအလောက်၏ထုတ်ကုန် လက်တွေ့ကျကျ အစောပိုင်းနှင့်လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ရာစုအတွင်းမှာတီထွင်ထားတဲ့အမေရိကန်အတွေးအခေါ်ပညာ။ လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ချက်၏နိယာမနှင့်အတူအမှန်တရား၏သဘောသဘာဝဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , အမှန်တရားလူမှုရေးဆက်ဆံရေးမျိုးသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များ၏အတွေးလွတ်လပ်သောအချို့စိတ္တဇဘုံတှငျမတည်ရှိပါဘူး, အစား, အမှန်တရား ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်အတည်ပြုချက်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုတက်ကြွစွာလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦး function ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးနီးကပ်စွာဝီလျံဂျိမ်းစ်နှင့်ဂျွန် Dewey ၏လုပျငနျးနဲ့ဆက်စပ်ပေမဲ့လည်းအမှန်တရားတစ်ခုလက်တွေ့သီအိုရီ၏အစောဆုံးဖော်ပြချက်လက်တွေ့ကျတဲ့ချားလ်စ်အက်စ်ပီယပ်၏အရေးအသားများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, "အဘယ်သူကိုအညီသကဲ့သို့ချောအဓိပ်ပာယျမရှိဂုဏ်ထူးရှိ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောခြားနားချက်ပေမယ့်ဘာမှအတွက်ထားရှိရေး။ "
အထက်ပါကိုးကား၏အချက်တဦးတည်းလည်းဘယ်လောက်, ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့လျှင်, ထိုယုံကြည်ချက်အမှုအကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်ချက်၏သမ္မာတရားကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်မနိုင်ကြောင်းရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးစိုစွတ်သောလမ်းတစ်စိုစွတ်သောလက်, etc - ထို့ကြောင့်ရေစိုစွတ်သောသောစိတ်ကူးများ၏အမှန်တရားလည်း "wetness" အခြားအရာဝတ္ထုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနားလည်သဘောပေါက်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုမရနိုင်
ဒီစောဒနာအမှန်တရားရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုသာကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်မှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျနော်တို့အခန်းတခန်းတွင်တစ်ဦးတည်းထိုင်နေစဉ်ကစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အမှန်တရားရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါဘူး။ လူ့သတ္တဝါသံသယမ, ယုံကြည်ချက်ရှာအံ့သောငှါ, ကြှနျုပျတို့သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနပြုပါသို့မဟုတ်ပင်ရုံတ္ထုများနှင့်အခြားလူပါဝငျကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုမယ့်အခါရှာဖွေရေးရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
ဝီလျံဂျိမ်းစ်အမှန်တရား၏ဤလက်တွေ့ကျတဲ့နားလည်မှုရန်အရေးကြီးပါသည်ပြောင်းလဲမှုများကိုများစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အရေးအပါဆုံးဖြစ်ကောင်းပီယပ်များအတွက်စောဒကတက်ရာသမ္မာတရားကိုအများပြည်သူဇာတ်ကောင်များ၏အပြောင်းအလဲတချို့ရှိကြ၏။ ကျနော်တို့ပီယပ်သိပ္ပံနည်းကျလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အပေါ်ဗွေဆော်ပထမနှင့်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမယ် - အမှန်တရား, ထို့နောက်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းများကလေ့လာတွေ့ရှိလိမ့်မယ်လို့လက်တွေ့ကျတဲ့အကျိုးဆက်များအပေါ်သို့မှီခို။
ဂျိမ်း, သို့သော်, တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်း၏အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်အထိယုံကြည်ချက်-ဖွဲ့စည်းခြင်း, လျှောက်လွှာ, လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များနှင့်လေ့လာရေး၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကတစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အသက်တာ၌လက်တွေ့ကျသော utility ကိုရှိသည်ဖို့သက်သေပြသည့်အခါထို့ကြောင့်တစ်ဦးယုံကြည်ချက် "အမှန်တရား" ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့အသုံးဝင်သောအထောကျအကူများနှင့်တန်ဖိုးရှိရှိသက်သေပြလျှင်, ကအမှန်ပင်အားလုံးအပြီး "စစ်မှန်သော" အဖြစ်မှတ်ယူသင့်ပါတယ် - သူကယုံကြည်ချက်စစ်မှန်သောခဲ့ကြသည်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေ့မြင် "လျှင်အဖြစ်လုပ်ရပ်" ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရန်အချိန်ယူလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အမှန်တရား၏ဤနိယာမသူ၏အကျော်ကြားဆုံးလျှောက်လွှာ, အထူးသဖြင့်, ဘာသာရေးမေးခွန်းများကိုဘုရားသခင်၏ဖြစ်တည်မှု၏မေးခွန်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့စာအုပ်လက်တွေ့မှာတော့ဥပမာ, သူ wrote: "ဘုရားသခငျ၏အယူအဆဟူသောစကားလုံးများ၏အကျယ်ဆုံးအသိထဲမှာကျေနပ်ဖွယ်အလုပ်လုပ်တယ်လျှင်လက်တွေ့အခြေခံမူတွင်, ထိုသို့ '' စစ်မှန်တဲ့။ ''" ဒီနိယာမ၏တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျရေးဆွဲရေးအဆိုပါများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် အမှန်တရား၏အဓိပ္ပာယ်ကို: "စစျမှနျတဲ့ညာဘက်အပြုအမူကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းအတွက်သာမည်မျှပင်သည်နည်းတူ, စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းအတွက်သာအသင့်လျှင်ဖြစ်၏။ "
အမှန်တရားရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့သီအိုရီဆန့်ကျင်ကြီးပြင်းနိုင်သိသာကန့်ကွက်တဲ့အရေအတွက်, သင်တန်း၏, ရှိပါတယ်။ တဦးတည်းအရာများအတွက်, "အဘယျသို့အလုပ်ဖြစ်တယ်" ၏အယူအဆဟာအလွန်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ပါသည် - "။ ဟူသောစကားလုံးများ၏အကျယ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်မှာ" ဂျိမ်းစ်မအဖြစ်တဦးတည်းကျွန်တော်ရှာသော, မျှော်လင့်အထူးသဖြင့်တဲ့အခါယုံကြည်ချက်တဦးတည်းသဘောနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဘဲပျက်ကွက်သည့်အခါဘာဖွစျသှား အခြား?
ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးယုံကြည်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့သည်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ပြီးမြောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ - အဆုံး၌ကား, မိမိတို့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်အတွက်ကျရှုံးလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက် "စစ်မှန်သော" ခဲ့သလား
ယာကုပျ, ကပုံရသည်, ပီယပ်အလုပ်ရသောအလုပ်လုပ်တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်အသိအလုပ်လုပ်တစ်ဦးပုဂ္ဂလဒိဋ္သဘောမျိုးအစားထိုး။ ပီယပ်များအတွက်တစ်ဦးယုံကြည်ချက်ကြောင့်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်အရာဟောကိန်းများစေရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အခါ "အလုပ်လုပ်ခဲ့" နှင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည် - "။ အလုပ်ဖြစ်တယ်" အရှင်, တစ်ဦးကျဆင်းသွားဘောလုံးကိုလဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုထိမှန်မည်ကိုဂျိမ်းစ်သည်ယုံကြည်ချက်, သို့သော်, "အဘယျသို့အလုပ်ဖြစ်တယ်" ဟန် တူသောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုတာ "ကျနော်တို့ကိုကြိုက်မှဖြစ်ပျက်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်သမျှ။ "
ဤ ", အဘယျသို့အလုပ်ဖြစ်တယ်" ဟုမကောင်းတဲ့အဓိပ်ပာယျမဟုတျပါဘူးဒါပေမယ့်ပီယပ်ရဲ့နားလည်မှုကနေအစွန်းရောက်ထွက်ခွာမယ့်, ဤအမှန်တရား၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်ဘို့ခိုင်လုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သင့်အဘယျကွောငျ့မှာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
တစ်ဦးယုံကြည်မှုကဒီကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်မှာ "အလုပ်ဖြစ်တယ်" သောအခါအဘယ်ကြောင့် "မှန်" ကဖုန်းဆက်ပါ? အဘယ်ကြောင့် "အသုံးဝင်သော" နဲ့တူတစ်ခုခုကြောင့်မခေါ်ဘဲ? သို့သော်တစ်ဦး အသုံးဝင်သောယုံကြည်ချက် သေချာပေါက်စစ်မှန်သောယုံကြည်ချက်အတိုင်းမဖြစ် - ခြင်းနှင့်လူပုံမှန်အားဖြင့်သာမန်စကားပြောဆိုမှုမှာ "စစ်မှန်သော" ဟူသောစကားလုံးကိုသုံးပါကိုဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူး။
ပျမ်းမျှလူတဦးအဘို့, ကြေညာချက် "ဒါဟာငါ့အိမ်ထောင်ဖက်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းယုံကြည်ဖို့အသုံးဝင်သည်" မှာအားလုံး "ဒါဟာငါ့အိမ်ထောင်ဖက်သည်သစ္စာမှန်သည်။ " ကဲ့သို့အလားတူမဆိုလိုပါပါသညျ, ကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကိစ္စတွင်ဖြစ်နိုင်သည် အမြဲမဟုတ်အသုံးဝင်ပေမယ့်များသောအားဖြင့်သူတို့။ အဖြစ် နစ်ရှေး စောဒကတက်, တစ်ခါတစ်ရံ untruth အမှန်တရားထက်ပိုမိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့လက်တွေ့ကျကျ untruth ထံမှအမှန်တရားကွဲပြားခြားနားသွား၏နေရာလေးကိုနည်းလမ်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, မှန်သောအရာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ငါတို့အဘို့အကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအကျိုးဆက်များထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် Unreal ဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရန်, ကအလုပ်လုပ်တယ်သောအရာတို့အပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်မိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤသည်, သို့သော်, ဝီလျံဂျိမ်းစ်အားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အမှန်တရားများ၏လက်တွေ့ကျကျသီအိုရီအဖြစ်အတော်လေးတူညီမဟုတ်ပါဘူး။
လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ Myth ဟာ
ကျနော်တို့ကိုသင်တစ်ဦးအဓမ္မ Xmas လို: လောကရဲ့အဘယ်အရာကိုခရစ္စမတ်ပိတ်ရက်များအကြောင်းအဓမ္မ?
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်မချရ Is: ယုံကြည်ခြင်းကအသိပညာ၏ရင်းမြစ်မဟုတ်
Fumihiko ဂွေ, Form ကိုနှင့်အလင်း၏ဂျပန်ဗိသုကာပညာရှင်
PHP ကိုမရေး () Function
Manu ၏ဥပဒေများအတွက်ဟိန္ဒူအိမ်ထောင်ရေး 8 အမျိုးအစားများ
တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ Death Row မှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာမျှော်
မက္ကစီကိုနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့ - စက်တင်ဘာလ 16
မှန်ကန်စွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အတွက် Equilibrium ညီမျှခြင်း calculate ကိုမှသင်ယူပါ
Chester တစ်ဦးကအာသာ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှစျဆယျ့ပထမဦးစွာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်
ပထမအိမ် - နက္ခတ်ဗေဒင်အိမ်များ
တောင်တန်းအတိုင်းစက်ဘီးစီး Frame ကပစ္စည်းများအမျိုးအစားများ
ဘတ်စကက်ဘော၏အားကစားတစ်ခု Airball ၏အဓိပ္ပာယ်
Carnoustie, အပွင့်လင်း Rota အတွက်စကော့တလန်ဂေါက်သီး Links များ
အဘယ်ကြောင့်လက်စွပ်လက်ချောင်းအစိမ်းရောင် Turn သလား?
ရောမ7တောင်ကုန်း